Miisaaniyadda Isdhexgalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: Lars Pehrsón/Scanpix
Migrationspolitiken i budgeten
Publicerat onsdag 13 oktober 2010 kl 13.30
Dawladda ayaa miisaaniyaddeeda sannadka 2010 ku taagan dhabbadii ey ku doorasho-gashay marka laga hadlayo qorshaheeda is dhex-galka. Taa ayuu macnaheedu yahay in doowladdu miisaaniyad geliso inta badan mushaarrada shaqaalaha waxa loo yaqaano instegsjobb
”u tallaabsasho suuqa shaqo” ee soo-galootiga dalka ku cusub, iyo gunnada la siiyo iskuullada ku yaalla xaafadaha ajaaniibtu ku badan yihiin ee ku guuleeysta iney kor u qaadaan tayadooda.
Barnaamijkan ayaa ah kuwo qorshihiisii lagu jiro iyo sidii loo abuuri lahaa goobo loogu magac daray Nystartzoner ”goobaha billowga” ee ku yaala xaafadaha soo-galootigu ku badan yihiin, waana qorshe ay wasiirka manaafacaadku Maud Olofsson ku macneeysay sidan, muddadii uu socday tartankii doorashadu:
Qorshahani wuxuu suurta-geli karaa oo keliya aakhirka xilliga afarta sannadood ee aannu xilka heyn doonno. Waxaa hoowshan baaritaankeeda la guda geli doonaa kadib kolka la ansixiyo bisha diseembar 2010 miisaaniyadda dawladda ee sannadka foodda innagu soo haya. Baaritaanka ayaa qaadan doona muddo sanooyin ah intii aanu hir-gelin. Miisaaniyadda ayaa qeexaysa in nidaamka noocaniya oo haddaba ka jira dalka Faransiiska tusaale ahaan baaritaan loogu sameeyo si niyad sami leh.
Dawladda ayaa sidoo kale miisaaniyaddeeda ku soo ban-dhigtay in muhiimadda la saaro sidii gacan loogu fidin lahaa ajaaniibta shurkadleyda ah. Middaasina oo loola jeedo sidii loo siin lahaa talooyin iyo
gacan-qabasho, loo siin lahaa deeymo yar yar iyo in laga bilaabo xaafadaha ajaaniibtu ku badan yihiin xafiisyo ammuurahaa qaabilsan, eyna ka hoowl-galaan shaqaale ka caawiya sidii suuqa shaqada ey ku soo geli lahaayeen, shirkado ku furan lahaayeen ama tacliin ku raadsan lahaayeen. Hase yeeshee aaney illaa hadda caddeeyn sida qorshahaasi u ekaan doono.
Dawladda ayaa sidoo kale u qoondaysay iskuullada ku guuleeysta iney tayada kor u qaadaan 60 malyuun oo koron sannadaha 2012-2014 ee foodda innagu soo haya. Wasiirka tacliinta Jan Björklund ayaa sheegay in aan middaa lagu qiimeeyn doonin dhibcaha shahaadooyinka ardayda. Hase yeeshee tahay sidii loo abuuri lahaa iskuulaad ku dayasho mudan.
Miisaaniyadda Dawladda ee Soo Galootiga